Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Miaraka amin'ny BMK, Very Goavana ny tontolon'ny fizahan-tany afrikanina
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Travel Wire News • Vaovao Mafana Oganda • Vaovao isan-karazany
Dr. BulaimuMuwanga Kibirige, fantatra koa amin'ny anarana hoe BMK
An'i Allah tokoa isika ary an'i Allah no hiverenanay ny hafatra rehefa niaiky ny filoham-pirenena jeneraly Oganda Yoweri TK Museveni ny fandraisana anjara mahatalanjona nataon'i Dr. Bulaimu Muwanga Kibirige, fantatra koa amin'ny hoe BMK. Nanangana harena be ho an'i Afrika sy ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany izy. Nodimandry tany amin'ny hopitaly Nairobi i BMK ary nandao ny vady aman-janany 18.
Mpandraharaha Ogandey nankalazaina sy mpigilahy mandray vahiny, Dr. BulaimuMuwanga Kibirige, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe BMK, dia nodimandry ny marainan'ny 10 septambra 2021 tao amin'ny Hopitaly Nairobi taorian'ny ady naharitra tamin'ny homamiadan'ny prostaty izay voamarina voalohany tamin'ny 2015.
Teraka tamin'ny 2 Oktobra 1953, BMK dia lehilahy nampianarin-tena, nahavita tena ary avy tamina zazalahy kely iray izay nandavaka sekoly taorian'ny fito ambaratonga voalohany mba hivarotra kafe teo anilan'ny rainy efa nodimandry ary ny mpanoro hevitra ny fasana Hajj Ali Kibirige lasa iray amin'ireo ireo mpandraharaha mpanankarena indrindra sy manan-karena indrindra eto amin'ny firenena sy ny sisa.
Izy no filohan'ny Vondron'orinasa BMK ary mpandraharaha nahazo mari-pankasitrahana iray amin'ireo gadra sy marika amperinasa fantatry ny maro ao amin'io faritra io, ao anatin'izany ny Hotel Africa 233-misy efitrano misy kintana 4 izay toerana ankafizin'ny fivoriana sy atrikasa ao an-tanàna Kampala. ivon-toeran'ny fivoriambe misy delegasiona sy efitrano fandraisam-bahiny miisa 3,500 XNUMX.
Ny vondrona mandray vahiny dia manana famatsiam-bola ihany koa any Moroto any Atsinanana atsinanana sy ny Hotel Africana Lusaka Zambia.
Ny BMK koa dia nanambola tamin'ny varotra trano, fitaovana fanamboarana, fizarana moto, ary biraon'ny fifanakalozana vola vahiny any Oganda, Kenya, Tanzania, Dubai, Rwanda, Japan, ary Zambia.
I BMK koa dia nanangana ny diany Boda Boda - teny iray izay nidina tamin'ny diksionera anglisy anglisy izay midika hoe "bisikileta na moto ampiasaina amin'ny taxi-be hitondra mpandeha na entana."
Izy koa dia niasa tao amin'ny latabatra filoham-pirenena mpamatsy vola (PIRT), sehatra iray natokana ho an'ireo olona ambony mpandraharaha notarihin'ny HE the President, izay manoro hevitra ny governemanta amin'ny fomba hanatsarana ny toetrandro fampiasam-bola ao amin'ny firenena.
Portfolios hafa natolony ny mpikambana teo aloha tao amin'ny Birao sy ny talen'ny Uganda Chapter an'ny Fikambanana Amerikanina Avaratra Uganda (UNAA) ary ny filoham-pirenena Uganda-American Sickle Cell Rescue Fund.
Nahazo mari-pahaizana doctorat momba ny Philosophy momba ny Humanities tao amin'ny United Grgraduate College sy Seminary izy.
Ny tantaran'i BMK dia notantaraina indrindra tao amin'ny bokiny "Ny tantarako amin'ny fananganana harena ao Afrika."
Nalefa tamin'ny volana martsa 2021 raha narary izy, mitantara izany na dia teo aza ny sakana tamin'ny fiainana dia nahavita nanao izany izy ary nanangana harena be tatsy Afrika.
Tamin'ny 1982, nandritra ny diany ho tovovavy ho any Japon, dia nanondrana kitapo 52,000 XNUMX US kitapo ilay mpandraharaha BMK ary niditra tamin'ny sidina namakivaky an'i Hong Kong izy. Tany Hong Kong dia tokony hanova sidina ho an'ny dingana farany amin'ny diany izy.
Nandritra ny filaharana teo amin'ny kaonteram-pisoratana anarana tao amin'ny seranam-piaramanidina dia nametraka ny valiziny izy teo am-piandrasana ny fotoanany hahazoana ilay pasiteritra.
Mpangalatra iray no naka ny valizy ary nihazakazaka haingana araka izay tratra. BMK dia naneno ny fanairana mafy araka izay azony natao saingy tsy nahasakana ilay mpangalatra izany rehefa nanjavona tao amin'ny seranam-piaramanidina feno olona izy.
Lasa ny volany rehetra. Ny pasipaorony koa, ary tsy afaka nankany Japon izy. Nentina niverina tany Oganda izy, izay tokony halefa any am-ponja na novonoina mihitsy aza.
Nandositra izy ary nanomboka nipetraka an-tsesitany tany Nairobi satria ahiahiana ho nanao hetsika fanoherana noho ny hareny.
Mitantara ny fiainany niasa niaraka tamin'ny fianakaviany i BMK, nanangana orinasa any amin'ny firenena maro, ary ireo fotoana nahafaly indrindra tamin'ny fiainany - ny drafiny ho an'ny vondrona BMK ary izay heveriny fa tokony hisy olona liana amin'ny fananganana harena ao anatin'ny 40 taona ho avy. Azy.
Nankalaza ny farihy BMK, ny filoha jeneraly Oganda Yoweri TK Museveni dia nilaza toy izao:
“Dr. Tsaroana mandrakizay i Bulaimu noho ny fandraisany anjara lehibe tamin'ny fananganana harena tany Oganda sy Afrika. ”
"Enga anie ka hipetraka amin'ny fiadanam-po mandrakizay ny fanahiny," hoy ny sekretera maharitra ao amin'ny ministeran'ny fizahan-tany sy ny fiainana an-tany fahagola, Doreen Katusime.
“Ny fahafatesan'ny Dr. Bulaimu Kibirige dia fatiantoka lehibe amin'ny indostrian'ny fizahantany sy fandraisana olona.
“Izy dia mpitondra niavaka ary olona manana kalitao ary misy akony lalina.
“Amin'ny maha goavambe an'ity indostria ity dia nahazo aingam-panahy lehibe ho an'ny maro izy.
"Hajaina sy hajaina hatrany ny BMK noho ny zava-bitany nahagaga, ary namela lova sarotra harahina izy."
Sary: Ronnie Mayanja Uganda Diaspora Network
Ny filohan'ny birao fizahan-tany any Oganda Hon. Daudi Migereko dia nilaza hoe: “Nahazo vaovao mampalahelo aho tamin'ny fahafatesan'i Haji Ibrahim Kibirige an'ny vondrona orinasa BMK sy ny Hotel Africaana.
“Kibirige dia nandray anjara betsaka tamin'ny fandraisana vahiny, fizahan-tany ary sehatra tsy miankina any Kampala, Oganda, ary ny Great Lakes Region of Africa.
“Ny fahafatesany dia fatiantoka lehibe ho an'ny fianakaviany, THE fraternity momba ny fizahantany, Oganda, ary Afrika. Misaotra an'i Allah izahay noho ny fandraisany anjara sy ny fototra navelany. Enga anie ny fanahiny hitoetra amin'ny fiadanam-po mandrakizay.
Avy amin'ny Uganda Hotel Owners Association (UHOA) izay toerana nitondrany talohan'ny naha filoham-pirenena azy taloha, dia mivaky toy izao ny paositera Twitter: “Dr. Ny BMK dia tandindon'ny fahatsarana, asa mafy, fanetren-tena, ary nanao zavatra betsaka izy ho an'ny sehatry ny Fandraisana vahiny; tsy ho hita izy, fa ny lovany dia mitoetra ao amin'ny UHOA sy ny orinasa BMK rehetra. "
“Mandria am-piadanana ry namako,” hoy i Susan Muhwezi (Chairlady). "Tamin'ny faramparan'ny taona 2000 raha matetika ny birao fizahan-tany any Oganda sy ireo mpiasan'ny fizahan-tany matetika no kivy amin'ny kasety mena handoa fampirantiana toa ny ITB Berlin sy WTM London, dia nampiasa ny fitaomany tamin'ny latabatra filoham-pirenena (PIRT) ho an'ny mpampiasa vola ny BMK mba hialana amin'ireo biraom-panjakana ary hahazoana antoka hahazoana famatsiam-bola . ”
Miozolomana mafana fo i BMK izay nanana ny anaram-boninahitra natolotra azy, nanondro ny silamo iray nanao ny fivahiniana masina tany amin'ny tany masina mekeka.
Ny vadiny sisa dia 2 - Sophia sy Hawa Muwanga - ary zanaka 18.
“Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un” - An'i Allah tokoa isika, ary amin'i Allah no hiverenantsika.